Vakanyoresa Agent Service mune dzese makumi mashanu States
Mumiririri Mumiririri inodiwa zviri pamutemo nekambani kana nekambani inezvikwereti zvishoma munzvimbo dzese. Mumiriri akanyoreswa anotambira zvinyorwa zvepamutemo uye anogona kubatsira kuverengera kuti mamwe magwaro akaiswa kuitira kuti kambani irambe yakamira zvakanaka. Nekudaro, mumiririri akanyoreswa anofanirwa kuwanikwa kunzvimbo yekugara yakanyorwa muzvinyorwa zveveruzhinji kubva na9 mangwanani kusvika na5 masikati masikati evhiki. Makambani Anopindirwa anopa yakanyoreswa mumiriri masevhisi mune ese makumi mashanu matunhu nenzvimbo dzinoverengeka dzekunze. Ndokumbirawo ubate shamwari kuti uwane zvimwe nezve sevhisi iyi. Vakanyoreswa vamiririri vanodiwa zviri pamutemo nematare mazhinji.
Makambani Anopindirwa anopa YEMAHARA yakanyoreswa mumiririri sevhisi neese ekubatanidza mapakeji egore rekutanga.